आरक्षण उचित की अनुचित ?::Online News Portal from State No. 4
आरक्षण उचित की अनुचित ?
बागलुङ, २८ साउन – जातीय बिभेदले बर्गको स्थापना गरेको भन्दै एक कार्यक्रमका सहभागिले जातीय आरक्षणलाई समावेशी, समानुपातिक ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाल आदिवासी जनजाती पत्रकार महासंघ फोनिजले आफ्नो २० औं स्थापना दिवशको अवसरमा आयोजना गरेको आरक्षण कति उचित, कति अनुचित भन्ने छलफलका सहभागिले बिभेदमा परेको बर्गलाई समावेश गर्न आग्रह गरे । राज्य तहबाट नीतिगत रुपमै केही जातीलाई मात्र अवसर दिने बनाइएकोले त्यो हट्नुपर्ने उनीहरुको भनाई छ ।
सहभागिले आरक्षण मार्फत पछाडि परेको समुदायलाई समान अवसरमा ल्याएपछि मात्र आरक्षण हटाइनुपर्ने समेत बताए । कार्यक्रममा नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघका अध्यक्ष तेजेन्द्र थापाले आरक्षण सधैका लागि नभएपनि राज्यका निर्णायक तहमा पिछडिएको समुदायको प्रतिनिधित्व नभएसम्म संचालन गर्नुपर्ने बताए । ‘आरक्षण शिक्षा क्षेत्रमा बढी आवस्यकता छ’ उनले भने, ‘शिक्षाको आरक्षणबाट प्रतिष्पर्धि जनशक्ती नआउन्जेल रोजगारीमा पनि चाहिन्छ ।’ राज्यको मुलधारको रोजगारी र राष्ट्रसेवामा पनि जनजाती अटाउनु पर्ने उनले बताए । ब्राम्हणहरुले मात्र अहिले सम्म राज्यको सबै तहमा बर्चस्व जमाएकोले अब सबैको समान अवसर पाउने वातावरण बनाउनुपर्ने उनले बताए ।
उनले आरक्षण बिषयमा अवधारणापत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष दिल शिरिषले समानुपातिक समावेशी अवसरले देशको सबै क्षेत्रमा बिकास संभव हुने बताए । कार्यक्रममा अभियान्ता यामबहादुर घर्तीले समावेशीकरणलाई हटाइयो भने नेपालीले फेरी बन्दुक बोक्ने चेतावनी दिए ।